Soo-saaraha hagaajinta baabuurta Shiinaha Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Ruiyi
The wiishka gawaarida lagu hagaajiyo waa la qaadi karaa, cusub naqshad, fududahay in la isticmaalo, badanaa loo isticmaalo dayactirka gaariga, adoo adeegsanaya qalabkan wuxuu si fudud kor ugu qaadi karaa dhererka gaariga, ku habboon shaqaalaha dayactirka in hagaaji gaariga.
Gawaarida isboortiga waa caqabad sababtoo ah dhulka ayay ku hooseeyaan kumana haboona jaranjarooyinka caadiga ah maxaa yeelay qallooca waa mid aad u dheer.
Jaranjarooyinkan hooseeya ayaa ah xalka. Jaaniddu waa tartiib tartiib ah 11.5 digrii oo dhererkeedu yahay 66 inji
Markii aad fuusho jaranjarooyinka, gaarigaaga waxaa laga qaadi doonaa 7 inji oo dhulka ah. Qalabkan laba wiish ah ayaa midkiiba 14 inji ku ballaadhsan yahay sagxadda iyo 16 inji oo ballaaran oo sagxadda ah.
Waxa kale oo jira joogsi giraangir ah oo isku dhafan. Waxay leeyihiin miisaan miisaankiisu yahay 3,000 rodol.
Dhismaha aluminium ee wiishkan ayaa ka dhigaya kuwo waara. Joogitaanka dheer ayaa ku habboon gawaarida dhulka hoose ee dhulka haddii aadan awoodin inaad hoosta ka degto.
Waxay sidoo kale leeyihiin xarig xarig ah oo gunta hoose ilaa I caawi iyaga si aamin ah ugu hayaan meesha inta aad gaarigaaga ku wado.
Nasiib darrose, waxay leeyihiin awood aad u hooseysa oo miisaankeedu hooseeyo. Tani ma aha inay dhibaato ku noqoto baabuurta yar yar ee isboortiga laakiin waxay noqon kartaa arrin la xiriirta gaari xamuul ah oo hoos loo dhigo ama gaari culus.
Welds sidoo kale ma ahan kuwa ugu fiican waxayna keeni karaan khatar jabin.
Gawaarida gawaarida waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo gawaarida waaweyn ama gawaarida kale ee waaweyn. Waa la tijaabiyaa si loogu isticmaalo badbaado leh ilaa 7,000 rodol.
Jiingad kastaa waxay ku fadhidaa 16 inji dusheeda iyo sagxaddiisa.
Waxay leeyihiin naqshad iskutallaab leh oo leh jaranjaro kasta oo leh dusha sare ee kala-goynta.Dhamaadka barxadda waa joogsi caan ah oo giraangiraha istaaga.
Tani waxay ku siin doontaa qol badan oo aad uga hoos shaqeysid gaariga.
Joojinta gawaarida weyn waa wax fiican taabasho inuu kaa ilaaliyo inaad si shil ah u rogmato meel aad u dheer iyo dhamaadka dariiqa.
Dareemka jajabka ee jaranjarooyinka ayaa xaqiijinaya in taayiradaadu ay helaan qabasho aamin ah waxayna ka caawinayaan sidii loo sii wadi lahaa jeexjeexyada meesha aad ku socoto.
Lambarka Moder CW060
Magaca Summada Jumei
Dayactirka mashiinada gawaarida, dhererka gaariga waa la kicin karaa. Qalabka hoos dhig taayirrada gaariga si aad kor ugu qaaddo gaariga oo u bannaanaato goobta ay ka shaqeyn karaan shaqaalaha dayactirka
Waa qalab dayactir baabuur oo aad u habboon oo wax ku ool ah oo loogu talagalay kormeerka iyo dayactirka gaariga hoostiisa, oo leh awood qaadasho wanaagsan
Lammaanaha gawaarida ku habboon ayaa ku habboon in lagu isticmaalo aqoon isweydaarsiga, garaashka ama guriga.
Lagu sameeyay bir culus.
Waara: Dhamaad cas.
Dhululubada wiishka wiishka lagu daro.
Iyada oo lagu Dhejiyay Jaakadaha Hawada.
Awood qaadista 2000 kg
Taayirada ilaa 245mm (taayiro ballaaran)
Wadarta dhererka: 1150mm Drive.
Dhererka la isku hagaajin karo laga bilaabo 270mm ilaa 375mm 1 silsilad koronto / halbeeg.
Cabbirka wadada: 1150 x 240 x 270mm (L x W x H)
Cabbirka barxadda: 380 x 250mm (L x W)
Eeg buuga sheyga ee rakibida gaarka ah.
Ama nala soo xiriir.
Tayada jawaab celinta iibsadaha waa mid wanaagsan, wax ku ool ah oo fudud, awood xamuul qaadasho, nolol adeeg dheer, isku xirnaan habboon.
Xiga: Baaskiilka Baaskiilka
Gawaarida Caster, Shiinaha Mashiinka la taaban karo, Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Shiinaha PU xumbo Wheel, Shiinaha PU Wheel, PU Wheel,